ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအကြားခြားနားချက်များ | ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
သူတို့ကမကြာခဏပြောရလျှင်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည် မှားတဲ့နည်းနဲ့ သူတို့ဆိုလိုသည့်အခါစည်းကမ်းချက်များကိုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု နှစ်ခုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအရာ။ ရှင်းနေသည်မှာ၎င်းသဘောတရားနှစ်ခုသည်သူခံစားနေရသည့်ပျက်စီးခြင်းကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ် လူနှင့်လူတို့၏လက်ကြောင့်ဖြစ်သည် မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကုသပါ.
ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းအောက်တွင်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ် တစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးအနှုန်းထားရှိရေးပါဘူး သို့ပြုလျှင်သင်နားလည်လိမ့်မည်။
ကျွမ်းကျင်သူများကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဟူသောဝေါဟာရ၊ အပူချိန်၊ မိုးရွာသွန်းမှု (သို့) လေကဲ့သို့သောရှုထောင့်များကိုအကျိုးသက်ရောက်သည့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများကိုရည်ညွှန်းသည် ဆယ်စုနှစ်များစွာ။ ဆန့်ကျင်တွင်, ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု ကမ္ဘာအနှံ့ပျမ်းမျှအပူချိန်မြင့်တက်လာခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။
ဤသည်ပူနွေးလာမှု၏ပြင်းအားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဖြစ်ပါတယ် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့များ ၎င်းသည်လေထုထဲတွင်ရှိပြီးသူ့ဟာသူထက်ပိုသောအရာမရှိပါ ခေါ်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုရှုထောင့်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုသံသယမရှိပါ ဒါကတကယ့်တကယ့်ပြproblemနာပါ နှင့်ကမ္ဘာဂြိုဟ်တစ်ခုလုံးသည်ခုန်ကျော်။ နွေးနေသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်အချို့အရကမ္ဘာဂြိုလ်၏အပူချိန်မြင့်တက်လာသည်7ဒီဂရီထက်ပို ပြီးခဲ့သည့်ရာစုတလျှောက်လုံး။ သိပ္ပံပညာရှင်များကပျမ်းမျှအပူချိန်အားဖြင့်တိုးလာလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းထားသည် 1.1 6.4 ဒီဂရီဘွဲ့ ၂၁ ရာစုတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီဟာတွေကတကယ့်ကိုစိုးရိမ်စရာအချက်တွေဖြစ်တယ် ရာသီဥတုအလွန်အန္တရာယ်များသောအပြောင်းအလဲများ.
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏ဤဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်နေ့စဉ်နှင့်နေ့စဉ်ဖြစ်ပေါ်သည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏မည်သည့်.ရိယာ။ နေရာများစွာတွင်မိုးရွာသွန်းမှုတိုးပွားလာပြီးရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အခြားကမ္ဘာ့ဒေသများတွင်မူဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ရှိခဲ့သည် ပြင်းထန်သောမိုးခေါင်ရေရှားမှု ။ နွေရာသီလများအတွင်းအပူလှိုင်းများဖြစ်သည် ပိုပိုပြီးမကြာခဏ၊ သေဆုံးမှုများနှင့်သစ်တောမီးများပိုမိုများပြားစေသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအကြားခြားနားချက်များ
လာကာလာ (@calamtz) ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါမှတ်ချက်။ လွန်ခဲ့တဲ့ရာစုနှစ်ကအပူချိန် ၇ ဒီဂရီမြင့်တက်သွားပြီလို့ခင်ဗျားအမှားမှားမိတယ်၊ မှန်တယ်ဆိုတာ ၀.၇ ဖြစ်မယ်။ မင်းကိုအသုံးဝင်တဲ့ဒီလင့်ကိုငါထားခဲ့ပါ။
La Cala (@calamtz) ကိုပြန်ပြောသည်။